Izilingo ezintsha zomdlavuza we-Roundup ziyasondela naphezu kwemizamo yokuxazulula iBayer - i-US Right to Know
Posted on April 1, 2021 by UCarey Gillam
UKen Moll ubhincisela empini.
UMoll, ongummeli wokulimala ozinze eChicago, unamacala amaningi okulindeleke abhekane nalowo owayekade eyiMonsanto Co, konke okusolwa ukuthi ababulali bokhula benkampani iRoundup kubanga i-non-Hodgkin lymphoma, kanti manje ulungiselela amacala ambalwa ukuba aqulwe.
Ifemu kaMoll ingenye yedlanzana elinqabile ukunikezwa izivumelwano okwenziwe ngumnikazi weMonsanto uBayer AG, kunalokho wathatha isinqumo sokulwa nokuvikeleka kwemikhiqizo yokubulala ukhula esuselwa eMonsanto ibuyele ezinkantolo ezweni lonke.
Yize iBayer iqinisekise abatshalizimali ukuthi iletha ukuvalwa kwamacala abizayo e-Roundup amadili okuhlala sekungaphezu kwe- $ 11 billion, amacala amasha we-Roundup isafakwa, futhi ikakhulukazi abaningana babekelwe ukuqulwa kwecala, okuqala ukuthi kuqale ngoJulayi.
"Siya phambili," kusho uMoll. "Senza lokhu."
UMoll uhlele ofakazi abangochwepheshe abafanayo abasize ukunqoba izivivinyo ezintathu zeRoundup ezigcinwe kuze kube manje. Futhi uhlela ukuthembela kakhulu emibhalweni efanayo yangaphakathi yeMonsanto enikeze izambulo ezishaqisayo zokungaziphathi kahle kwezinkampani eziholele amajaji ukuthi anikeze umonakalo omkhulu wokujeziswa kwabamangali kolunye lwalezo zivivinyo.
Kuzoqulwa icala ngoJulayi 19
Icala elilodwa elinosuku lokuvivinywa oluzayo lifaka phakathi owesifazane oneminyaka engama-70 ogama lakhe linguDonnetta Stephens waseYucaipa, eCalifornia owatholakala ukuthi une-non-Hodgkin lymphoma (NHL) ngonyaka ka-2017 futhi wahlushwa izinkinga eziningi zezempilo phakathi kwemijikelezo eminingi ye-chemotherapy. UStephens usanda kunikezwa icala “lokuthandwa,” okusho ukuthi icala lakhe selisheshisiwe, ngemuva kwabameli bakhe wazise inkantolo ukuthi uStephens "usesimweni esibuhlungu esingapheli," futhi ulahlekelwa ukuqonda nokukhumbula. Icala lihlelelwe ukuqulwa ngoJulayi 19 eSan Bernardino County Superior Court eCalifornia.
Amanye amacala amaningi asevele anikezwe izinsuku zokukhetha, noma afuna izinsuku zokuqulwa kwecala, zabantu asebekhulile futhi okungenani ingane eyodwa ephethwe yi-NHL abasolwa ngabamangali ibangelwe ukuvezwa kwemikhiqizo ye-Roundup.
"Amacala awakapheli. Kuzoba yikhanda eliqhubekayo kuBayer naseMonsanto, ”kusho u-Andrew Kirkendall, inkampani yakhe ezinze eTexas esiza ukumela uStephens namanye amaklayenti afuna izivivinyo ezisheshayo.
UKirkendall uthe inkampani yakhe inamacala aqhubekela phambili ukuqulwa kwamacala eCalifornia, Oregon, Missouri, Arkansas naseMassachusetts.
"Lokhu kunamandla okuba ngamacala alandelayo e-asbestos, ”kusho yena, ebhekisa emashumini eminyaka amacala aletha izinkinga zezempilo ezihlobene ne-asbestos.
UBayer uthenge iMonsanto ngoJuni 2018 ngesikhathi kuqala ukuhlolwa komdlavuza we-Roundup. AmaJaji ecaleni ngalinye eliya ecaleni lathola ukuthi ukubulala ukhula kukaMonsanto kubanga umdlavuza nokuthi uMonsanto uchithe amashumi eminyaka efihla izingozi. Imiklomelo yamajaji ifinyelele ngaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 2, yize izahlulelo ziyalelwe ukuthi zehliswe enkambisweni yezikhalazo.
Ngemuva kokungena ngaphansi okukhulu ingcindezi evela kubatshalizimali ukuthola indlela yokufaka isikweletu, UBayer umemezele ngoJuni ukuthi kwase kufinyelele ekuxazululeni okungama- $ 10 billion ukuxazulula iningi lezicelo zomdlavuza we-Roundup ezingaphezu kwe-100,000 e-United States. Kusukela ngaleso sikhathi ibisayinda isivumelwano nezinkampani zabameli ezweni lonke, kufaka phakathi amafemu ahole amacala selokhu kwafakwa amasudi okuqala ngo-2015. Le nkampani izama nokuthola imvume enkantolo ngohlelo olwehlukile lwama- $ 2 billion lokuzama gcina amacala omdlavuza weRoundup angafakwa ngokuzayo ekulingweni.
IBayer yehlulekile ukuhlala nawo wonke amafemu namakhasimende omdlavuza weRoundup, noma kunjalo. Ngokwabameli abaningi babamangali, amafemu abo akwenqaba ukukhokhelwa kokukhokhelwa ngoba imali ngokuvamile ibisukela ku- $ 10,000 iye ku- $ 50,000 kummangali ngamunye - isinxephezelo abameli ababona bengeneli.
"Sithe cha," kusho uMoll.
Enye inkampani yabameli eqhubekisela phambili amacala ukuqulwa kwamacala yiSan Diego, eseSunleton Law Firm eseCalifornia, enamacala angaba ngu-400 Roundup asalindwe eMissouri kanti angama-70 eCalifornia.
Ifemu ifuna isivivinyo esisheshayo manje se- UJoseph Mignone oneminyaka engama-76, owatholakala ukuthi une-NHL ngo-2019. UMignone waqeda ukwelashwa ngamakhemikhali esikhathini esingaphezu konyaka odlule kodwa futhi ubekezelele imisebe yokwelapha isimila entanyeni yakhe, futhi usaqhubeka nokuhlupheka, ngokusho kwenkantolo efaka isicelo sokukhetha ukuqulwa kwecala.
Kunezindaba eziningi zokuhlupheka ngaphakathi kwamafayela wabamangali abasenethemba lokuthola usuku lwabo enkantolo ngokumelene neMonsanto.
Ummeli we-FBI osethathe umhlalaphansi noprofesa wasekolishi uJohn Schafer waqala ukusebenzisa i-Roundup ngo-1985 futhi wasebenzisa umuthi wokubulala ukhula kaningi entwasahlobo, ekwindla nasezinyangeni zasehlobo kuze kube ngu-2017, ngokwamarekhodi asenkantolo. Akazange agqoke izingubo zokuzivikela waze waxwayiswa ngumngani ongumlimi ngo-2015 ukuthi afake amagilavu. Watholakala ukuthi une-NHL ngo-2018.
URandall Seidl oneminyaka engamashumi ayisithupha nantathu ufake isicelo seRoundup ngaphezulu kweminyaka engama-24, kufaka phakathi ukufafaza njalo umkhiqizo ozungeze igceke lakhe eSan Antonio, eTexas kusukela cishe ngonyaka ka-2005 kuya ku-2010 bese ezungeza impahla eNyakatho Carolina kuze kube ngu-2014 lapho kutholakala ukuthi une-NHL, ngokusho kuka amarekhodi enkantolo.
URobert Karman usebenzise imikhiqizo ye-Roundup kusukela ngo-1980, imvamisa esebenzisa isifutho esiphatha ngesandla ukuphatha ukhula masonto onke cishe amasonto angama-40 ngonyaka, ngokwamarekhodi asenkantolo. UKarman kwatholakala ukuthi une-NHL ngoJulayi 2015 ngemuva kokuthi udokotela wakhe wokunakekela okuyinhloko ethole isigaxa emgodleni wakhe. UKarman ushone ngoDisemba walowo nyaka eneminyaka engama-77.
Ummeli wabamangali uGerald Singleton uthe okuwukuphela kwendlela kaBayer yokubeka icala leRoundup ngemuva kwalo ukubeka ilebula elicacile lokuxwayisa ngemikhiqizo yalo yokubulala ukhula, ukuxwayisa abasebenzisi ngengozi yomdlavuza.
"Yiyo kuphela indlela le nto ezophela yenziwe ngayo," esho. Kuze kube yileso sikhathi, uthe, "ngeke siyeke ukuthatha amacala."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker #Rounduptrial, I-B-cell non-Hodgkin lymphoma, Bayer, umdlavuza, izinkantolo, glyphosate, umthetho, Abameli, zomthetho, icala, Monsanto, NHL, i-non-Hodgin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi